Alshabaab oo ka hadlay weerarkii ay ku qaadeen ciidamada Mareykanka | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Alshabaab oo ka hadlay weerarkii ay ku qaadeen ciidamada Mareykanka
Alshabaab oo ka hadlay weerarkii ay ku qaadeen ciidamada Mareykanka
Ururka Al-Shabaab ayaa war qoraal ah ka soo saaray weerarkii Isniintii ay ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwo Mareykan oo ku yaalla deegaanka Janaa Cabdalle ee gobolka Jubbada Hoose.
Qoraalka ayaa intaas ku daray “AFRICOM waxay sidoo kale horay ugu fashilantay inay qirato xaqiiqada dhabta ah ee khasaaraha ciidamadooda kasoo gaaray weeraradii Ballidoogle iyo Manda Bay.”
Afhayeenka Taliska ciidamada Mareykanka Afrika ee AFRICOM, Chris Karns oo galabkii Isniinta weerarkaas kadib la hadlay VOA ayaa sheegay in Janaay-Cabdalle looga dhaawacay hal askari, wax khasaare ah oo kalena aysan soo gaarin ciidamadooda.
Chris ayaa dhanka kale sheegay inay dileen mid ka mid ah dagaalamayaashii weerarka ku soo qaaday ee Al-Shabaab.
Deegaanka uu weerarku ka dhacay ee Janaay-Cabadalle ayaa 60-KM galbeed uga beegan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, waxaana Sabtigii lasoo dhaafay Al-Shabaab kala wareegay ciidanka xoogga dalka iyo kuwa Jubbaland oo is kaashanaya.